गुल्मीमा सत्यवती गाउँपालिकाले किसानलाई बाँड्यो ६१ वटा हाते ट्याक्टर – www.janabato.com
Latest TOP STORIES अर्थ / पर्यटन अर्थ / पर्यटन Sidebar समाचार
२२ मंसिर २०७५, शनिबार १४:१४ December 8, 2018 Janabato Online
गुल्मी । कृषिमा अधुनिकता ल्याउन भन्दै गुल्मीको एक गाउँपालिकाले ठूलो परिमाणमा मिनिटिलर (हाते ट्याक्टर) को वितरण छ । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका कार्यपालिकाले आ.ब.०७५/७६ को कृषितर्फको वार्षिक बजेट कार्यक्रमबाट एक कार्यक्रमका बिच कृषकहरुलाई मिनिटिलर (हाते ट्र्याक्टर) को वितरण हो ।
कृषक समूह एवम् व्यावसायिक कृषकहरु लक्षित गरी ५० प्रतिशत अनुदानमा ६१ वटा मिनिटिलर (हाते ट्याक्टर) कृषकहरुलाइ वितरण गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले बताए । परम्परागत कृषिलाई व्यावसायिक पेशाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुरुप कृषि प्रविधिको वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बताए ।
उनले गाउँपालिकाले कृषि, पशुपालन र पर्यटनको माध्यमबाट गाउँपालिकालाई आर्थिक रुपले विकसित बनाउने बताए । कृषिमा आधुनिताको प्रबिधि प्रयोग गरेर व्यवसायिक कृषि तर्फ कृषकहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रहरु राखिने बताए ।
अहिले गरि रहेको कृषिमा आधुनि प्रबिधि प्रयोग गरेर कम लागतमा धेरै उब्जनी बनाउनको लागि गाउँपालिकाले आगामी कार्यक्रमहरु समाबेश गर्दै लैजाने ढकालले बताए ।
गाउँपालिकालाई दुध, मासु, टमाटर, काउली आदिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात समेत सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण गरी अन्य अन्नबाली र तरकारीबालीमा समेत निर्यात गर्नुपर्ने अबस्था ल्याउन गाउँपालिकााले आमागी योजना बनाएको बताए ।
← माल्कोट पुगेका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई गाजाबाजा सहित भब्य स्वागत
काठमाडौंमा प्रलेसको ‘रूपान्तरणका लागि कविता’ →
प्रदेश नं. ५ मा जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, जनतामा असन्तुष्टि र निराशा
१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०७:०० Janabato Online Comments Off on प्रदेश नं. ५ मा जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, जनतामा असन्तुष्टि र निराशा
मानव अधिकारकर्मी एवं लेखक उचैंको निधन, मगरघाटमा अन्त्येष्टि
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १४:०१ Janabato Online Comments Off on मानव अधिकारकर्मी एवं लेखक उचैंको निधन, मगरघाटमा अन्त्येष्टि
३ श्रावण २०७५, बिहीबार ०२:३० Janabato Online Comments Off on गुल्मीमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई राजिनामा दिन विप्लव नेकपाको चेतावनी